Facebook मा बिपा सम्झौता | नेपाल इटाली डट कम
Facebook मा बिपा सम्झौता
October 24, 2011 — nepalitaly
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय लगानीका उद्योग गैरव्यावसायिक कारणले बन्द भएमा नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधानसहितको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षासम्बन्धी -बिपा) सम्झौता गरेका छन् । यस सम्झौताले नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयमले यो सम्झौतालाई ‘जोखिम’ मानेका छन् । ‘यो सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मैले पनि धेरै सोचेँ, तर राष्ट्रिय भावनाले मात्र देश बलियो हुँदैन, आर्थिक समृद्धिले मात्र हुन्छ, आखिर कसै न कसैले रिस्क लिनुपथ्र्यो, मैले लिएँ,’ सम्झौताको औचित्य पूष्टि गर्ने प्रयासमा उनले भनेका छन् । सम्झौताको समर्थन र विरोध गर्ने सिलसिला सुरु भएको छ आगामी दिनमा यो अझै बढ्नेछ । विरोध गर्नेमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित उनकै पार्टी माओवादीका विरोधी खेमाका नेताहरु समेत छन् । हरेक ताजा विषयमा जस्तै यो विषयले पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुलाई तताएको छ । आम जनमतको प्रतिबिम्ब मान्न सकिने फेसबुकमा राखिएका टिप्पणी तथा प्रतिक्रियाहरुलाई हामीले जस्ताको तस्तै उतारेका छौं ।
बिपा सम्झौताले पहिलो कुरा नेपालका सानातिना राष्ट्रिय उद्योग पनि ध्वस्त हुनेछन् । समान सहुलियत दिएपछि मुलुकका उद्योग-व्यवसायले भारतीय व्यवसायीसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नै छैनन् । र, तिनको अस्तित्व क्रमशः समाप्त हँुदै जानेछ । दोस्रो गैरव्यावसायिक कारणले कुनै पनि उद्योग बन्द भए त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्नेछ । यो बिपा सम्झौता सार हो । यद्यपि गैरव्यावसायिक बन्दको परिभाषा सम्झौतामा प्रस्ट रूपमा गरिएको छैन । सम्झौताअनुसार मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता रहेको अवस्थामा कुनै समूहले बन्द हड्ताल, आक्रमण गरे करोडाँै रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउने नेपालका अर्थविद्को भनाइ छ । निश्चित रूपमा यो सम्झौतालाई आधार मान्दै युटिएलजस्ता थुप्रै भारतीय कम्पनीले आफ्नो क्षतिपूर्तिको दाबीसहित नेपाल सरकारको कठालो समात्न मैदानमा उत्रिनेछन् । यसरी नेपाल आर्थिक रूपमा चौपट हँुदै जानेछ भने भारतले भने आफ्नो औपनिवेशिक नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै लानेछ ।
अब राजनीतिक दल र तिनका आसेपासेले गर्ने बन्द-हड्तालले भारतीय कम्पनीमा हुने क्षतिको नेपालको ढिकुटीबाट पूर्ति गरिदिने रे । मान्नैपर्छ नेपाली महान् नेतालाई जो भारतलाई खुसी बनाएर देशलाई कंगाल बनाउन माहिर छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई र रामेश्वर खनालले गरेको काम कुनै पनि हालतमा राष्ट्रघाती हुँदैन ।
डा. बाबुरामले दुई करोड ६६ लाख नेपालीलाई भिखारी बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेछन् । अर्को महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा टाट उल्टेका भारतीय व्यापारीहरू क्षतिपूर्ति माग्न आउँछन् । अर्थका अधिकारीहरू २० प्रतिशत कमिसन माग्दै फाइल सदर गर्छन् । एभरेस्ट भिनाइलदेखि डाबर र युनिलिभरले पाउने क्षतिपूर्ति रकम अर्बौंको अंकमा हुनेछ । तिहारको मुखैमा बाबुरामले देश बेच्ने जुवा खेले र सारा सम्पत्ति बुझाए ।
माओवादीले भारतका कठपुतली भनेर आरोपित गरेका माधव नेपालले समेत हस्तक्षार गर्न अस्वीकार गरेको भारतीय लगानीका उद्योग बन्द भएमा नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बिपा सम्झौतामा बाबुरामलाई के त्यस्तो बाध्यता आइलाग्यो….. अनि नेपालको हितमा हुने दोहोरो कर हटाउने सम्झौतामा हस्तक्षार हुनबाट रोक्ने को हो ? वैद्य र बादलहरूले देखेको सिक्किमीकरणको खतरामा दम छ कि क्या हो ?
यस्ता कुरा हावा हो । व्यापारिक सम्झौता गर्दैमा कसरी राष्ट्रघात हुन्छ । गणतन्त्र ल्याउन दिल्ली सम्झौता गर्ने दलहरूले ठूला कुरा गर्नु सबै उस्तै हुन् ।
कामना गरौँ मित्र हो, कतै अर्को मोहनशमशेरको औतार यो देशमा देखा नपरोस्
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य
नेपाली नेताहरू विरोधका लागि विरोध गर्छन् । आर्थिक विषयवस्तुमा जिरो नलेज भएकाहरू नै सबैभन्दा बढी टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभई वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गाह्रो भइरहेको थियो । आन्तरिक पुँजीले मात्र देशको उन्नति हुँदैन भन्ने त सबैले बुझेकै हो । अनि नजिकको छिमेकी देशबाट लगानीको बाटाहरू खुलाउने प्रयासको ठाडो विरोध गरेर हतार गर्नुहुँदैन कि ?
राजेश घिमिरे, सर्वसाधारण
नेपाल र भारतबीच भएको बिपा सम्झौताको बहस हुनु अन्यथा होइन तर सम्झौताको पूर्णपाठ नपढेर राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको विश्लेषणमा हतारिनु राजनीतिक केटौलेपन भएन र ?
भारतीय लगानीलाई सुरक्षा दिन्छु लगानी गर भन्दा कसरी राष्ट्रघाती भयो ? किन नेपालमा विदेशी लगातीकर्ता आउन इच्छुक छैनन् जबसम्म यसरी शासकले दिमागलाई सही सदुपयोग गर्दैनन् तीन करोड नेपाली पीडा नै पीडा सहेर बस्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईले बिपासँग भन्दा पनि बिपाशासँग सम्झौता गरेको भए खासै विवाद हुदैन थियो की ?
हिम विष्ट, पत्रकार
बिपा सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नेहरू परिवर्तनविरोधी हुन् । उनीहरू क्रान्तिका ठुल्ठूला कुरा गरेर देशलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा जानबाट रोक्न खोजिरहेका छन् । हिजो गरिएको सम्झौता नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भनेर देखाउन खोजिएको मात्रै हो । क्रान्तिका कुरा गरेर सडकमा उत्रेर आन्दोलन गरेर चर्को नारा लगाएर देश बन्ने भए उहिल्यै बनिसक्ने थियो । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ । यी डाहाले औडाहा भई पेसा धान्न कराउहरूको पछि लागी दोहोरी खेल्न जरुरी छैन ।
बिपा सम्झौतालाई एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रघाती भनेका छन् तर यसमा कुनै आधार छैन । खनाल र अन्य नेताहरूले आफ्नो प्रतिशोधका लागि आदरणीय कमरेड बाबुरामको अपमान गर्नुहुँदैन, जबसम्म सरकारले वैदेशिक लगानीको सुरक्षा दिँदैन तबसम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू भित्रिन सक्दैनन् । बिपा सम्झौताले लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सहयोग गर्छ । फटाहा नेताहरूले भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन् तर यथार्थ त्यो होइन । मिडिया र पत्रकारले जनतामा गएर सर्वेक्षण गरी भ्रम हटाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
बिपा सम्झौतालाई लिएर राष्ट्रवादी आन्दोलनको उठान हुन थालेको देखिन्छ । वैद्य र जेएनले रणनीतिक रूपमा बाबुरामलाई राष्ट्रियताविरोधी घोषणा गरेका छन् । मलाई लाग्छ, बिपाका विषयवस्तु आपत्तिजनक छैनन् । बाबुरामले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व यसमा आमसहमति खोज्नुपथ्र्यो । भारत वा चीनको लगानीविना नेपाल आर्थिक प्रगतिमा अघि बढ्न सक्दैन । बाबुरामले बिपाको सम्बन्धमा विपक्षी तथा विज्ञहरूलाई कुनै पत्तो दिएनन् । यो उनको कमजोरी हो । अन्यथा यो ठीक छ ।
अरू कसैले गर्न नसकेको सम्झौतामा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भएको बहुचर्चित लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता -बिपा) ले युद्ध, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, दंगालगायत कारणबाट हुने नोक्सानीको लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चित गरेको छ । एक-अर्का देशमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर भएको बिपा सम्झौताको धारा ६ मा क्षतिपूर्ति दिँदा आफ्ना लगानीकर्ताभन्दा कम दिन नपाइने उल्लेख छ । ‘युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले अर्को देशका लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः स्थापन, हर्जना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा आफ्ना वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
« Flooding in Rome